PressReader - Kwayedza: 2018-10-05 - Wanzai maticha eVenda: Mambo
Wanzai maticha eVenda: Mambo
Kwayedza - 2018-10-05 - Nhau Dzemuno - Thupeyo Muleya ari kuBEITBRIDGE
MUKURU wemadzishe (paramount chief) kuBeitbridge East, Mambo Stauze – VaDavid Mbedzi – vanoti vanoshushikana zvikuru nekushomeka kwevarairdzi veChiVenda mudunhu ravo vachiti izvi zviri kukanganisa kupasa kwevana vepuraimari muzvikoro zveko.
Vanoti zvakakosha kuti vana vepuraimari vadzidziswe pachishandiswa rurimi rwaamai.
KuBeitbridge district kune zvikoro zvinodarika 15 zvepuraimari uye zvakawanda zvinodzidzisa Ndebele nekuda kwekushomeka kwevarairidzi veVenda. Venda ndiwo mutauro unonyanyoshandiswa neveruzhinji mudunhu iri uyewo mimwe mitauro yeko iShangani neSotho.
Mambo Stauze vanoti Hurumende inofanira kudzidzisa maticha akawanda vane ruzivo rwemimwe mitauro kunze kweNdebele neShona chete sezviri mubumbiro remutemo weZimbabwe.
“Tine dambudziko guru mudunhu rino sezvo tiine varairidzi vashoma vanokwanisa kudzidzisa vana vachishandisa mitauro yemuno,” vanodaro.
Vanoenderera mberi vachiti, “Mamiriro ezvinhu aya ari kuita kuti vana vedu vadofore zvikuru mumazamanishoni emitauro zvichivashaisa mikana yekuenda kunodzidza kune zvimwe zvikoro zvakanaka, izvo zvakawanda zvacho zvinosarudza vana nemapasiro avanenge vakaita.
“Izvi zvakare zviri kuita kuti vana vedu vaomerwe kana vachinge vave kukwikwidzana nevekune mamwe matunhu munyaya dzedzidzo.
“Tine vanhu mudunhu redu vanokwanisa kunodzidzira huticha uye chinongodiwa chete rutsigiro kuburikidza nekuita kosi yacho nekuzoita kuti pavanenge voshanda voshandira mudunhu redu.
“Zvakakoshawo kuti pave nekumuka kwemabasa mudunhu rino, zvikuru muchikamu chezvedzidzo.”